Mareykanka oo soo dhaweeyay go’aanka Midowga Africa | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo soo dhaweeyay go’aanka Midowga Africa
Wasaaradda Arrimaha dibdda Mareykanka ayaa soo dhoweysay qoraalkii kasoo baxay Shirkii Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Africa, kaas oo looga hadalay xaaladda Soomaaliya.
WASHINGTON, USA - Xafiiska Arrimaha Africa ee Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka aya soo dhaweyay warka ka soo baxay Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Africa, ee ku aadan muddo kordhintii uu 12-kii bishaan Aqalaka Hoose ee Baarlamaanka Soomaalaaiya u sameeyay Maxamed CabdullaahI Farmaajo.
Qoraalka ka soo baxay Xafiiska Arrimaha Africa ee Mareykanka oo ah mid ka turjumaha go’aanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ayaa lagu taageeray cambaareyntii uu Guddiga Amniga iyo Nabadda Midowga Africa, ka jeediyay muddo kororsiga, waxayna soo dhaweeyeen dhexdhexaadinta uu wado Midowga Africa.
“Waxaan taageersannahay go’aankii Golaha Nabada iyo Amniga ee Midowga Afrika ee lagu cambaareeyay muddo kordhinta ay toddobaadkii hore ansixiyeen Baarlamaanka Soomaaliya”. Ayaa lagu waraka ka soo baxay Xafiiska Arrimaha Africa ee Mareykanka.
Waxa ay intaas la sii raacsiiyay “Waan soo dhaweynaynaa dhexdhexaadinta Midowga Afrika, waxaan ku boorineynaa Madaxda Soomalida inay heshiis degdeg ah ka gaaraan khilaafka doorashada”
Golaha Amniga iyo Nabadda Midowga Africa, ayaa kulan ay shalay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya kadib cambaareeyay ficilladii 12 -kii Abriil 2021 ee Golaha Shacabku, ee ay ku kordhiyeen waqtiga Madaxweynaha iyo Baarlamanka.